HomeSuuqaWenger Oo Ka Tegaya Arsenal Iyo Vieira Oo Noqonaya Tababaraha Cusub Ee Kooxdaas
Qaar ka mid ah wargeysyada caalamka ayaa shaaciyey in tababaraha kooxda Arsenal, Mr. Arsene Wenger uu ka tegayo kooxdiisa, isla markaana uu doonayo inuu tababare u noqdo xulka dalkiisa ee Faransiiska.
Tababare Wenger ayaa la rumaysan yahay in marka uu koobka adduunka ee bisha June ka qabsoomi doona dalka Brazil, uu u dhaqaaqi doono dhinaca magaalada Paris halkaas oo uu tababare ka noqon doono xulka dalka Faransiiska.
Wargayska Sunday People ayaa sheegay in xidhiidhka kubadda cagta France ay si aad ah u doonayaan in Arsene Wenger uu sida ugu dhakhsaha badan ula wareego shaqada tababarenimo ee xulka qaranka France si uu u layliyo tartanka Euro 2016 oo ka dhici doona isla France.
Dhanka kale wargayska ayaa intaa ku daray in halyaygii hore ee Arsenal Patrick Vieira uu beddeli doono Arsene Wenger oo uu noqon doono tababaraha cusub ee kooxda Arsenal, waxayna ku sheegeen inuu yahay ninka u sharraxan tababaraha Arsenal.
Patrick Vieira oo hadda tababare u ah da’yarta kooxda Man City ayaa lala xidhiidhiyey inuu tababare u noqon doono kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub waxaana ka mid ah kooxdiisii hore ee Inter Milan.
Qandaraaska Arsene Wenger ee kooxda Arsenal ayaa ku eg bisha June 2014 ee isla sanadkan waxaana lafilayaa inuu isaga tago kooxda Arsenal dhamaadka xili ciyaareedkan maadaama uu dhamaanayo heshiiskiisu, illaa haddana aanu jirin heshiis cusub oo uu saxeexay.